Field School of Archaeology (FSA) | LibraryThing auf Deutsch
Bücher von FSA durchsuchen
Alle Sammlungen-----------periodicalsမဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်အစီရင်ခံစာEnglish BooksDeine Bibliothek
FSA ist eine von mehr als 5,000 Organisationen auf LibraryThing.
Zufällige Bücher aus der Bibliothek von FSA:
Inventory of Monuments at Pagan / Inventaire Des Monuments: Monuments 256-552 von Pierre Pichard
The Great Chronicle Of Buddhas vol 1 .Part One von Bhaddanta Vicittasarabhivamsa
Buddhism in Pakistan von A Pakistani Buddhist.,
Chinese book von _
The geology of Burma von Harbans Lal Chhibber
Gillghit manuscripts vol.II part II von Dutt Nalinaksha
Intaglios, Cameos, Rings and Related objects from Burma and Java, The white collection andafurther small private collection von Sheila E.Honey MIDDETON
Mitglieder mit FSAs Büchern
Rezensionen von FSA
Fremde Rezensionen von Büchern in FSAs Bibliothek
Sammlungenperiodicals (1), မဂ္ဂဇင်း (1), ဂျာနယ် (1), အစီရင်ခံစာ (2), English Books (788), Deine Bibliothek (802), Alle Sammlungen (802)
TagsHardship and downfall of buddhism in India (1), Pagan;the origin of modern Burma (1), Ramakien (1), : (1), Early History (1) — alle Tags anzeigen
MediumNicht angegeben (395), Buch (406), Gedrucktes Buch (401), E-Buch (4), Sonstige (1)
Über meine Bibliothekရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ပြည်)​ စာကြည့်တိုက်သည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာများအတွက်​ အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး​ စာကြည့်တိုက်တွင် ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊​ သုတရသစာပေများ၊ ဂျာနယ် များ၊ သတင်းစာများ၊ ဘွဲ့ယူကျမ်းများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ စာတမ်းငယ်များ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များ၊​ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊​ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ​ များ ဖတ်ကြားတင်သွင်းသည့်စာတမ်းများ၊​ ပညာရှင်များလှူဒါန်းထားသည့်စာအုပ်များ​ စသည် တို့ကို အထူးပြုစုဆောင်းထားရှိပါသည်။​ စာကြည့်တိုက်တွင် မြန်မာစာအုပ် ( ၄၈၀၅ )အုပ်၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် ( ၁၉၉၃ )အုပ်၊ မြန်မာမဂ္ဂဇင်း( ၄၅၂ )အုပ်၊ အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်း​ ( ၁၂၃ )အုပ်၊ ဂျာနယ် ( ၃၅၉ )အုပ်၊ သတင်းစာ ( ၅၁၅၃ )စောင်၊ ဘွဲ့ယူကျမ်း ( ၃၉၁ )အုပ်၊ အရာရှိမွမ်းမံစာတမ်းများ​ ( ၈၅ )အုပ်၊ စာတမ်းငယ်များ ( ၁၄၆ )အုပ်၊ အစီရင်ခံစာ ( ၁၀၄၇ )အုပ်၊ လက်ကမ်းစာစောင် ( ၁၁၇ )စောင်နှင့် အထူးစာစု ( ၁၄၉၄ )အုပ်နှင့် VCDခွေ ( ၅၉ )ခု စုစုပေါင်း ( ၁၆၂၂၄ )တို့ကို (၂၀၂၀)ခုနှစ် မေလအထိ စုဆောင်းထားရှိပါသည်။​
Bürgerlicher NameField School of Archaeology
LibraryThing-Links /profile/FSA (Profil)
Mitglied seitMay 22, 2020
FSA hat hinzugefügt:
34Th International Symposium Conservation and Restorartion of Cultural Property Restoration of Cultural Property"Reconstruction Process" and Cultural Heritage Disaster , Conflict, and Social Changes
Hamlet Survey Report Duanglam Village von Socialist Republic of viet Nam .Nara National Research Institute For Cultural Properties
The Stupa of Bharhut:aBuddhist Monument Ornament with Numerous Sculptures Illustrative of Buddhist Legend and History in the Third Century B.C. von Alexanader Cunningham
Institute of Archaeological Published by The Director General Archaeological Survey of India
A hundred years of archaeology von Glyn Daniel
The Journal of Burma Studies von Catherine Raymond
Über uns | Kontakt/Impressum | LibraryThing.com | Datenschutz/Nutzungsbedingungen | Hilfe/FAQs | Blog | "Gschäfterl" | APIs | TinyCat | Nachlassbibliotheken | Early Reviewers | Wissenswertes | 155,675,583 Bücher! | Menüleiste: Immer sichtbar